Maxaa Sabab u ah Dagaalka Xuduudda labada Sudan, maxaa-se lagu soo koobi karaa Eray-ga salka u ah? | Berberanews.com
Home WARARKA Maxaa Sabab u ah Dagaalka Xuduudda labada Sudan, maxaa-se lagu soo koobi...
Maxaa Sabab u ah Dagaalka Xuduudda labada Sudan, maxaa-se lagu soo koobi karaa Eray-ga salka u ah?
Sudan-(Berberanews)- Inkastoo ay dooduhu aad u adag yihiin, haddana sababta dagaalkani way sahlan tahay waxaana lagu soo koobi karaa hal eray oo ah Saliid.
Waxay ahayd saliidda midda shidaysay dagaal sokeeye oo tobannaan sano ka dhex socday woqooyiga iyo koofurta iyo shidaalkeeda, iyo cidda yeelanaysa ceelasha saliidda, ayaana ah waxa sii wada xiisadda iyo dagaalka labada dhinac u dhexeeya. Sidaa waxa lagu sheegay warbixintan oo lagu baahiyey bogga Internetka ee laanta Af-Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da oo aannu ka soo xigannay.
Dhibaatadu waxay ahayd inkastoo ay labada geesood saxiixeen heshiis nabadeed oo dhammaystiran sanadkii 2005tii oo dagaalkii sokeeye lagu soo afjaray, haddana maqaamka deegaanka Abyei, oo ah meel ay ku yaalliin ceelal badan oo saliideed, marnaba go’aan lagama gaarin, xadka labada dal u dhexeeyana marna si buuxda looma calaamadin.
Hase ahaatee kaddib rayn-rayntii madaxbannaanida koofurta iyo xiriirka labada dhinac oo dhalaalay, arrimihii aan xalka laga gaarin ayaa dib u soo noqday. Waxaa la rabay in dadka reer Abyei ay afti samaystaan ay mustaqbalkooda go’aan uga gaaraan laakiin taas dib ayaa loo dhigay.
Waxaa muran ka taagan yahay cidda run ahaantii deggan Abyei iyo in lagu soo darayo iyo in kale dadka Carabta reer miyiga ah ee la yiraa Misseriya oo doonaya inay raacaan woqooyiga. Xataa baaxadda dhabta ah ee Abyei ayaa lagu muransan yahay.
Guddi xuduudaha ee sanadkii 2005tii waxay ku dareen ceelasha saliidda ee Heglig inay qayb ka yihiin Abyei laakiin sanadkii 2009kii maxkamadda joogtada ee caalamiga ah ee dhexdhexaadintu waxay sheegtay in ceelashaasi aanay ka tirsanayn Abyei.
Dhinac walba waxaa uu sheeganayaa in ceelasha saliidda ay iyagu leeyihiin, mid kastaana waxaa uu ku eedeynayaa midka kale inuu dagaalka bilaabay iyo inuu taageerayo jabhado xasillooni darro ka abuura gobolka. Sidaas darteed waxaan haynaa waxaa weeye muran ku dhex jira muran iyo sababo fara badan oo dagaal lagu galo.
Previous articleWasiirka arrimaha gudaha oo Sheegay haddii Caddaalad lawaayo inaan Qaran, Nabad iyo Horumar la helaynin
Next article“bari iyo saadanbe haddii uu ka danbeeyo go’aanka Daahir Riyaale anigu war war weyn baan qabaa inuu Udub tartamiba karaayo” Afhayeenka UDUB, Cali Gurey.